AOC Gaming Monitor U28G2AE / BK | Akụkọ Ngwa
Miguel Hernandez | 15/11/2021 13:00 | General, Nyocha
Monitors aghọwo ihe dị mkpa maka ndị na-egwu egwuregwu na ndị na-emekọrịta ozi, ọ bụrụgodị na PC gị bụ laptọọpụ, ọ dịghị ihe dị ka ihuenyo dị mma iji soro oge egwuregwu gị kacha mma, na AOC Gaming maara ọtụtụ ihe banyere nke ahụ. Ya mere, taa, anyị na-ewetara gị ihe nleba anya ọhụrụ nke ị ga-eji nweta ihe kacha mma na egwuregwu gị.
Anyị enyochala AOC Gaming U28G2AE / BK Monitor, ihe nleba anya enweghị nke nwere Freesync na mkpebi na-akụda mmụọ. Agbagharala nyocha miri emi nke anyị na-agwa gị ike niile na n'ezie adịghị ike nke nyocha a haziri maka ndị na-egwu egwu kachasị.
3 Njikọta na ngwa
4 Ụdị egwuregwu na AOC G-Menu
Nke a AOC Gaming U28G2AE / BK Ọ nwere ihe egwu egwu egwu na egwuregwu mana nke a nụchara anụcha, ịmalite na anyị nwere okpokolo agba belatara n'akụkụ atọ ya, anyị na-ekwu maka akụkụ elu na akụkụ, n'akụkụ ala anyị nwere ọkọlọtọ ụlọ ọrụ na ntuziaka abụọ. na uhie. N'ụzọ doro anya, na olee otú ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụghị, anyị nwere ntọala nwere nnukwu atụmatụ abụọ na-emepụta ya kpamkpam na nwa. Anyị nwere nha ihuenyo nke sentimita 28 ma ọ bụ ihe ka mma kwuru 71,12 centimeters na mkpokọta.
Akụkụ: 469.5 (H) × 636.4 (W) × 244.9 (D)
Mkpokọta ibu: 6,13 n'arọ
* nke ngwaahịa, na-agụnyeghị ngwugwu
Zụrụ AOC U28G2AE na ọnụahịa kacha mma> Njikọ
Anyị nwere bezel ederede, ihe nkwụnye dị mfe ịwụnye yana n'ezie asambodo VESA. 100 × 100 ma ọ bụrụ na anyị chọrọ kpọgidere ya na mgbidi, ihe m na-akwado. Ha niile nwere mkpọchi Kensington kpochapụrụ. Anyị nwere ngagharị kwụ ọtọ n'etiti -5º na +23º, ee, anyị anaghị ebugharị ya n'akụkụ. N'ụzọ doro anya, ngwaahịa ahụ na-esonyere ya na isiokwu "ịgba chaa chaa" ya nke ọma, a na-enwekwa ekele dị ukwuu na usoro nhazi nke nkwado ahụ site na ịpị usoro na azụ. N'azụ ahụ bụ ebe ma ọdụ ụgbọ mmiri njikọ na ọkụ ọkụ dị, yana na bezel ala anyị nwere njikwa menu mmetụ aka.
Anyị na-aga ozugbo na raw data. Ihe nlebanya 28-inch a nwere atụmatụ a IPS LCD panel nke na-emesi anyị obi ike n'ọhụụ dị ukwuu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngụkọta dịka ule anyị si dị anyị enweghị ike ịghọta ụdị aberration ọ bụla. Ọ nwere mkpuchi mgbochi ọkụ nke a na-enwe ekele dị ukwuu ma na-agbachitere nke ọma megide ọkụ artificial. Ọdịdị nke panel bụ 16: 9, ezigbo maka igwu egwu na ọkụ azụ ya bụ site na usoro WLED, nke na-enyere aka ịchịkwa ebe gbara ọchịchịrị nke ọma.
Maka akụkụ nke ya, anyị nwere nchapụta kacha nke nits 300 nke na-eme ka anyị na-esetịpụ ihe doro anya, anyị enweghị nkwado HDR, ihe n'ọnọdụ ọ bụla ga-ebelata nzaghachi nke panel, nke bụ 1 millisecond (GtoG). Otu ihe ahụ na-eme na ọnụego ume ọhụrụ, nke maka ndị egwuregwu na-achọsi ike ọ na-anọ naanị 60Hz ma ee anyị gaara enwe ekele maka ihe ọzọ. Banyere agba, anyị nwere ọdịiche dị ike nke nde asatọ na otu na static otu puku na otu, niile so ya. Teknụzụ AMD Freesync iji kwalite arụmọrụ egwuregwu.
Kedu ka ọ ga - esi bụrụ ma ọ bụghị, anyị nwere 85% nke ọkọlọtọ NTSC na ndị 119% nke ọkọlọtọ sRGB ya mere ọ dịkwa mma maka idezi ya, ihe anyị mere na ebe a gbachitere ya n'ọtụtụ ebe. Mgbama ugboro dijitalụ na-erute site na HDMI 2.0 ma ọ bụ DisplayPort 1.2 ọnụego a kapịrị ọnụ nke 60Hz na mkpebi 4K ma ọ bụ UHD. Ọ na-aga n'ekwughị na iji belata ike ọgwụgwụ anyị nwere usoro Flicker-Free na Low Blue Light, na nke a ka m na-ekwusi ike, ihe nleba anya a karịrị ihe nleba anya egwuregwu dị mfe, ọ na-esote oge dị mma nke iji na arụmọrụ ndị ọzọ dị ka ọrụ, multimedia oriri. na N'ezie ụlọ ọrụ akpaaka.
Njikọta na ngwa
Ihe nleba anya a nwere ọdụ ụgbọ mmiri HDMI 2.0 abụọ n'azụ ya, nke ga-enye anyị ohere ijikọ n'otu oge, dịka ọmụmaatụ, PC anyị yana njikwa njikwa anyị. Ngwaọrụ anyị na-amalite ga-akpọku onye nleba anya na-akpaghị aka wee mara nke ọdụ ụgbọ mmiri HDMI ga-amalite na-akpaghị aka, na n'echiche m dị mkpa na nyocha egwuregwu. N'ezie, anyị tụfuru itinye obere USB HUB ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri USB-C nke ga-enye anyị ohere ijikọ akụkụ anyị ozugbo na ihe nleba anya, nke a gaara echekwa anyị ohere na tebụl. Ọ bụrụ na-amasị gị, ị nwere ike zụta ya Ebe a na ọnụ ahịa kacha mma.
Njikwa Shadow AOC na agba egwuregwu AOC: Ihe mgbakwunye ngwanrọ AOC ndị a na-egosipụta ọkụ na nchapụta nke ọma, na-enye ahụmịhe dị nso na HDR akwadoro, na-agbanyụ akụkụ ụfọdụ nke panel nke anaghị eji iji wepụta ojii dị ọcha.
Ọ baghị uru ikwu, anyị nwekwara otu ngosi Port 1.2 ọdụ ụgbọ mmiri yana mmepụta ekweisi ngwakọ 3,5-millimita. Maka akụkụ ya, anyị agaghị echefu na AOC a U28G2AE/BK nwere okwu abụọ, ya mere anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụda stereo, ịbụ 3W nke ike onye ọ bụla. Ọ bụ ezie na o zuru ezu iji wepụ anyị n'ụzọ ma na-eme ihe oriri multimedia, ọ dịghị akpọ bass, n'agbanyeghị na ahụmahụ ahụ dị mma na-atụle compactness nke nyochaa na ndị a na-ekwu okwu. Ọ bụ nkọwa iji tinye ụdị ndị na-ekwu okwu nkwado a, karịsịa mgbe ọtụtụ ndị nlekota ndị ọzọ n'otu ebe adịghị agụnye ha.
Ụdị egwuregwu na AOC G-Menu
Ihe nlebanya ahụ nwere ụdị egwuregwu akọpụtagoro isii: FPS, RTS ma ọ bụ ịgba ọsọ, agbanyeghị, site na igodo Ntọala AOC. (nchịkọta bezel nke ala) anyị nwere ike ịhazigharị profaịlụ, chekwaa nke ọhụrụ na ọbụna gbanwee ndị dị adị. Ana m akwado mgbe niile ka ị jiri menu a, onye interface ya nwere ọgụgụ isi, iji dozie ya nke ọma yana masịrị gị.
Ọzọkwa, AOC G-Menu Ọ bụ ngwa agbakwunyere nke anyị nwere ike iwunye na Windows na nke ahụ na-enye anyị ohere ịhazi ndị nlekota anyị na njirimara ụfọdụ yana ụfọdụ parampat, ee, n'oge anyị ahụghị ihe karịrị interface enyi enyi, mana otu ọrụ ma ọ bụ yiri nke menu.
Nke a AOC U28G2AE / BK Ọ bụ ezigbo ihe ọzọ dị mma na nke dị iche iche dị ka ihe nleba anya egwuregwu, ọ nwere nha, imput-lag na njikọ dị mma nke ukwuu, yana panel IPS na-egbuke egbuke zuru oke yana njiri mara mma. Anyị na-atụ uche ikekwe HDR ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ume ọhụrụ dị elu, mana n'ime oke ya nwere ike ịtụ anya njirimara ya, ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe na-efu. Ị nwere ike zụta ya na Amazon site na euro 323,90, na ọnụahịa kacha mma yana nnyefe n'ime otu ụbọchị.
Ihe na: November 15 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: November 5 nke 2021
Nnukwu imewe na njikọta
Obere latency na ezigbo njikwa nchapụta
Panel nwere mkpebi dị mma
Agbaghara m 120Hz
Enweghị USB HUB
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Nyochaa AOC Gaming U28G2AE / BK
Realme GT Neo2, ike ọzọ dị n'etiti etiti